David Mayoral, Forbes uye Alias ​​Robotic: matatu masangano uye imwe nzvimbo yekuenda ... | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe ukaverenga isu kazhinji iwe uchaziva kuti muLxA takaita inonakidza hurukuro naVictor Mayoral, co-muvambi weErle Robotic. Uye izvozvo zvine chekuita nei? Unogona kunge uri kufunga… Eya, Victor ihama yaDavid, protagonist wenyaya yedu. Uye isu tinofara kuzivisa izvozvo David Mayoral yakasarudzwa kubva kune yakakurumbira runyorwa rwe Forbes 30 Pasi 30 2019 muEurope, runyorwa rwevanonyanya kukosha vezvemabhizimusi, mune iyi nyaya mumunda wehunyanzvi ...
Nei wakachigamuchira? Zvakanaka, kune rakakura basa uye trajectory yezera rake rehudiki, sezvo iye aine yakavambwa Erle Robotics, kutanga kweSpanish kwatakataura nezvako pano kazhinji kuti vave protagonists yeakawanda matsva mumunda weerobhoti. Asi handicho chega chinhu, ikozvino iye zvakare ari CEO uye akatanga imwe inonakidza kwazvo yekutanga inonzi Alias ​​Robotic uye yakanangana ne cybersecurity yemarobhoti.
Erle Robotic, yaive inotengeswa kuSwitzerland nyika zhinjiNaizvozvo, izvozvi zvava neya Acutronic Robotic. Uye saErle Robotic akatipa mufaro wakawanda, ndine chokwadi Alias ​​Robotic Iyewo achadaro, nekuti kana David ari shure kwake, isu tinongotarisira uye tinomushuvira ramangwana rimwe (sezvandakaratidza mumusoro wenyaya ino): kubudirira.
ari marobhoti ndezvezvino neramangwana, uye ndiani anoziva kana avo vari kuzotibhadharira mari yedu yepenjeni munguva pfupi ... Kune marobhoti akawanda uye akawanda ari kuita munzvimbo dzakasiyana siyana, uye kuchengetedza chengetedzo yeaya masisitimu chinhu chekutanga. Ndosaka Alias ​​Robotic vakatarisa pane izvi, vachishandisa ruzivo rwekuvaka marobhoti avakawana naErle, uye nechikwata chakakura chakabatanidzwa kubva kumativi akasiyana (multidisciplinary) kuvimbisa kuchengetedzeka uye kuvanzika munyika ye robhoti.
Makorokoto David, uye hupenyu hunobudirira hweAlias ​​Robotic!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » David Mayoral, Forbes uye Alias ​​Robotic: matatu masangano uye imwe chete nzvimbo ...